Muuse Biixi & Maalgashiga dalka! | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Muuse Biixi & Maalgashiga dalka!
DP world heshiiskii dekedda Berbera iyo Wadiiqada Wajaale (waddada yar ee Berbera lagu xidhayo Xuduudda Itoobiya). Shirkaddaa oo dalka boqolaal milyan gelinaysa. Heshiis indhaha dunida soo jiitay ayuu ahaa. Somaliland-na ku muujay khariidadda dunida. Waxa aad uga hinaasay, intii karaankooda ahna ka dagaallamay dawladda Somalia, wayse ku ilko beeshay.
Heshiiskii shirkadda muwaadinka Somaliland ee ina Aw Siciid. Waxa lala galay heshiis 30 sano ah (shirkadaha waxay dalalku la galaan muddooyin dheer sida 30, 50, 100 sano, inta badanna muddo aan xaddinaynba) Waayo, shirkaddu dalka lacag badan bay gelinaysaa, waa inay muddo dheer heshaa si ay lacagtaa dib ugu soo ceshato.
Heshiiskii fly dubai. diyaaraddan oo dunida ku xidhay Somaliland, lagana raystay diyaaraddii Itoobiya ee kootada ku haysatay Somaliland, iyadoo lacag xad dhaaf ah tikidhadeeda kaga iibisa muwaadiniinta Somaliland. Flydubai iyo Alcarabiya ayaa lagu nafisay. Waxa kale oo shaqooyin ka helay dhallinyar badan oo xafiisyo_tikidh Hargaysa ka furtay. Muuse heshiiskii wuu ka baxay, diyaaradihiina dalka wuu ka joojay, isagoo ku eedeeyey inay Somalia ka qaateen oggolaansho ay Hargaysa ku yimaaddaan. Oo Somalia soo officially masuul kama aha hawada Somaliland. Kaaga darane Somaliland soo may oggolaan in maamulkii hawada ee Nairobi ee UN-tu maamulaysay in Xamar lagu wareejo. Haddayna diyaaraddu Xamar ku soo horraynayn ee Hargaysa toos u imanayso, maxaa innaga galay ogolaanshaheeda Somalia. Suuragal ma tahay inayna Ethiopian airlines oggolaansho ka haysan Somalia?
Heshiisyadii Somaliland maalqabeenka la gashay waxa ka mid ahaa kii daabacadda buugaagta dugsiyada dalka 2016kii ee lala galay shirkadda HEMA. Iyadoo dawladdu ayna lacag iyo awood madbacadeed oo ay ku daabacdo buugaata iskuulada lahayn. Dad Muwaadiniin Somalilander ah ayaa maalgeliyey oo keenay madbacado heer sare ah, oo ka haqab tiray buugaagta dalka. intii ka horraysay heshiiska (2016) waxa buugaagta lagu soo daabici jiray Nairobi, waxana lala baryi jiray UNICEF, UNESCO iyo hay’adaha gargaarka ee dalalka Yurub iyo Canada. Waxana Somaliland lagu xidhi jiray shuruudo adag oo ah fara-gelin manhaj dalka iyo wixii carruurteena loo dhigayo. Tusaale ahaan waxa Somaliland lagu qasbay inay manhajka ka ilaaliso taariikhda SNM, aan laga hadal xusuuqii dalka ka dhacay iyo wax kasta oo wiiqayaya la midowga Somalia oo tarriikhi ah iyo xaqiiqooyin dhacay, in lagaga ilaaliyo buugaagta carruurteenna lagu barbaarinayo. Somaliland inkastoo ayna weli manhajkii UNESCO u dejisay beddelin (karti la’aan iyo maamulxumo xagga wasaaradda ka jira awgeed) haddana markii u horraysay ayay xagga buugaagta ka madax bannaanaatay oo ay noqotay dal isku tashada. Shalayna shir jaraaid oo wasaaradda waxbarashadu qabatay ayay ku qireen xaaladda adag ee HEMA kala soo dabbaaladday dalka. Hema maalgelin wayn ayay ka samaysay dalka gobollada oo dhan ayay ka furatay qaybo iyagoo isku hallaynaya heshiiskii ay la galeen dalkooda.
Waxa kaloo jiray heshiisyo kale oo dadyow fara badan dawladdii Siilaanyo la gashay, hase yeeshee Muuse uu kaga baxay. Nabigeennii Salaani korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi calaamadka munaafaqa waxa ka mid ah: Saddex: hadduu sheekeeyo, been buu sheegaa. Hadduu ballan galo wuu ka baxaa. Haddii la aamino wuu khaayimaa. Waa xadiis ku yaal saxiixu Mulim. Waa halka Soomaalidu ka keentay maahmaahda ah: Ballan darro waa diin darro. Anigu ma lihi Muuse, shaqsiyan, waa munaafaq laakiin xadiisku wuxuu sheegay in ballan ka buxu ka mid yahay calaamaadka munaafaqnimo.
Heshiiska waddan lala galo, madaxwayne kasta oo yimaad wuxuu ku qasban yahay inuu ilaaliyo, illeen shaqsiga madaxwaynaha ah, heshiiska lalama gelin ee waxa lala galay dalka. Sidaasaa dalka lagu aaminaa laguna maal gashadaa. Markaa madaxwayne Muuse Biixi Somaliland wuxuu ka dhigay dal aan shilin lagu aamini karin, markaa halkaasaa lagu waayay maalgashi shisheeye. Muwaadinkuna sida qayrkii loogu xiiray wuu arkayaa. Maalin dhowayd oo uu ka hadlayay Muuse kulan uu la lahaa madaxda xisbiyada kale ayuu yidhi: Waxaan ugu baaqayaa ganacsatada dalka inay maalgeliyaan waddada Hargaysa – Burco!!!!!!!! Maalintaa maalintii ku xigtayna wuxuu ka baxay heshiiskii maalgashi ee HEMA. Maxaa la yidhaa qofka qawlkiisa iyo ficilkiisu is khilaafaan? Hadda Mucaaridkana ha ka filan inay Muuse ka duwan yihiin! waayo kamay hadal arrintii Ina AW Siciid, oo madaxwaynaha ayay u mashxaradayeenba. Heshiisyadii kale ee muwaadiniinta lagaga baxay, sidii kuwii diyaaradaha, mucaaridku madaxwaynaha wuu ku hambalyeeyey, iyadoo la qabiileeyey dadkii wakiilka ka ahaa diyaaradaha. Arrintan HEMA ha ka filan in cidi juuq ka daba tidhaa madaxwaynaha.
Fiiro gaar ah: Madaxwaynaha iyo hoggaamiyayaasha mucaaridku inay yihiin munaafiqiin Ilaahay baa innaga og, laakiin xadiiska Rasuulku wuxuu caddeeyey waxyaabaha lagu garto munaafiqiinta. Markaa qofku hadduu isku arko sifooyinkaa waa inuu towbad keenaa oo iska suuliyo tilmaamahaa foosha xun.
Ayanle Amir Bidde
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo si diiran loogu soo dhaweeyay Djibouti
Next articleBiixi oo ka qaybgalay calleemo-saarka Geelle